Yugyan Daily » घर बनाउनु अघि गरिने यस्ता गल्ती जसले तपाईंको लगानी डुब्न सक्छ
घर बनाउनु अघि गरिने यस्ता गल्ती जसले तपाईंको लगानी डुब्न सक्छ
काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नं १६ सामाखुसीका दिवेश प्रधानले एक वर्षअघि तीन तलाको घर किने
काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नं १६ सामाखुसीका दिवेश प्रधानले एक वर्षअघि तीन तलाको घर किने । घर नामसारीको सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि त्यतिबेला उनले घर बनाइएको जग्गाका बारेमा प्राविधिक विषयप्रति चासो दिएनन् । उनलाई प्राविधिक कुरा थाहा त थिएन नै इन्जिनियरलाई यस विषयमा सोधेर अतिरिक्त खर्च गर्न उनले चाहेनन् । तर एक वर्षपछि घर बेच्ने क्रममा उनी छाँगाबाट खसेजस्तै भए ।
तत्कालीन बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सडक विस्तारको क्रममा जीएलडी डिजाइन गर्दा प्रधानले किनेको घर बनेको जग्गा बाटो कायम भइसकेको थियो । घर किन्ने बेलामा यस विषयमा जानकारी नलिँदा उनको करोडौंको सम्पत्ति संकटमा परेको छ ।
त्यस्तै झमेला कलंकीका अर्का एक जग्गाधनीले पनि व्यहोरेका छन् । जग्गाको दुईतर्फ बाटो रहेको उनको जग्गामा कम्तीमा पनि तीनवटासम्म घर बन्ने अपेक्षा थियो । उनले जग्गा बाँडफाँट गर्नुपूर्व आवश्यक परामर्श लिँदा सो जग्गामा त मुस्किलले एउटा मात्रै घर बन्ने अवस्था देखियो । धन्न उनले सुरुमै जग्गाबारे इन्जिनियरिङ परामर्श लिएका कारण उनको घर निर्माणमा हुने सम्भावित लाखौंको जोखिम टरेको छ ।
धेरै इन्जिनियरको गुनासो सुनिन्छ, करोडौं रुपैयाँमा घर बनाउने घरधनीले एउटा इन्जिनियरलाई नियुक्त गरेर पारिश्रमिक दिन सक्दैनन् । यही कन्जुस्याइँका कारण २०७२ सालको भूकम्पमा धेरै धनजनको क्षति पुगेको बताउँछन्, काठमाडौं महानगरपालिकाका इन्जिनियर जनार्दन गिरी ।
सिकर्मी र डकर्मीको अनुभवको आधारमा घर बनाउने चलन सहरी भेगमा बिस्तारै कम हुँदैछ । तर अझै पनि इन्जिनियरको भूमिका केवल घरको नक्सा तयार पार्न मात्रै हो भन्ने बुझाइले समस्या सिर्जना गरेको इन्जिनियरहरू बताउँछन् ।
महानगरपालिकाका इन्जिनियर गिरी घर बनाउँदा इन्जिनियरको जिम्मेवारी समेत ठेकेदारलाई दिने गरिन्छ । उनी भन्छन् ‘अहिलेको समस्याको मूल जड नै यही हो ।’ सरकारी मापदण्डअनुसार घरको जग हाल्नेदेखि निर्माणसम्पन्न हुँदासम्मको जिम्मेवारी इन्जिनियरको हुनुपर्ने हो । तर इन्जिनियरलाई नियुक्त गरेर नियमित पारिश्रमिक दिनु अनावश्यक देख्ने प्रवृत्तिले स्वयं घरधनीले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्ने गरेको गिरी बताउँछन् ।
त्यस्तै, इन्जिनियर महेन्द्र राज खत्रीले इन्जिनियरिङ गर्दा भोगेको समस्या फरक किसिमको छ । आफ्नो जग्गाको अवस्थिति नहेरी इन्टरनेटबाट घरको नक्सा प्रिन्ट गरेर त्यस्तै डिजाइनमा घर बनाउन खोज्ने घरधनीबाट सबैभन्दा धेरै समस्या भोग्नुपरेको उनी सुनाउँछन् । गिरी पनि त्यो समस्या खत्रीको मात्रै नभएर आम इन्जिनियरको भोगाइ रहेको बताउँछन् ।
घर निर्माणपूर्व त्यसको डिजाइन गर्ने विभिन्न आधार हुन्छन् । सबैभन्दा महत्वपूर्ण त जग्गा कति छ र कस्तो ठाउँमा छ भन्ने कुराले घरको डिजाइनलाई असर गर्छ ।
यसबाहेक जग्गाको अवस्थिति, हावापानी, घरधनीको पेसा र जीवनशैलीको आधारमा घरको डिजाइन फरक हुन्छ भन्ने बारेमा आममानिस जानकार नहुँदा इन्जिनियर र स्वयं घरधनीले समेत झमेला व्यहोर्नु परेको उनीहरूको अनुभव छ ।
खत्री घर बनाउनुपूर्व नै जग्गाको अवस्थिति र त्यसको नक्साको बारेमा यकिन जानकारी दिनुपर्ने बताउँछन् । आफूले भोगचलन गरेको जग्गामध्ये घर बनाउनको लागि योग्य जग्गा कति छ ? उनी मापदण्डअनुसार बाटोका लागि कति जग्गा छाड्नुपर्छ जस्ता विषयबारे जानकारी लिनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । यसक्रममा वास्तुलाई पनि महत्व दिइन्छ ।
घर कति तला बनाउने भन्ने विषय पनि नगरपालिका तथा महानगरपालिकाले तयार पारेको मापदण्डको आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । गिरीका अनुसार इन्जिनियरिङ परामर्शको अभावमा काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र नै धेरै संरचनाहरू मापदण्ड विपरीत रहेका कारण जुनसुकै बेला भत्किने सम्भावनामा छन् । जग्गाको फार कभरिङ, कुन ठाउँमा र कति वर्गफिटमा जग्गा छ भन्नेबारे जानकारी, जग्गा व्यावसायिक क्षेत्रमा छ या सम्पदा क्षेत्रमा छ ? भन्ने विषयले आफ्नो घर कति तलासम्म बनाउन पाइन्छ र त्यसमा केके सुविधा राख्नै पर्छ भन्ने विषयलाई निर्धारण गर्छ ।
गिरी उदाहरण दिँदै भन्छन् ‘पुरानो सहरी क्षेत्रमा चार तलासम्मको मात्र संरचना बनाउन सकिन्छ । तर इन्जिनियरलाई घरको नक्सामात्रै बनाउन काम लगाउने घरधनीले सुरुमा नै छ तलासम्मको घर निर्माण गर्ने सोचाइ राखेका हुन्छन् । त्यहीँबाट सुरु हुन्छ गैरकानुनी काम । जसले लाखौं खर्च गरेर बनाएको घर जुनसुकै बेला महानगर वा नगरपालिकाले भत्काउन सक्ने अवस्था रहन्छ ।’
त्यस्तै, ६ तलाभन्दा माथिको घर निर्माण गर्दा अपांगमैत्री संरचना निर्माण र अग्निनियन्त्रक संरचना समेत निर्माण गर्नैपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । तर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि समेत ६ तलाभन्दा कमको नक्सा इन्जिनियरलाई बनाउन लगाएर थप संरचना समेत उभ्याउने गरिएको पाइन्छ । जुन घरधनी स्वयंको लागि जोखिमको विषय हो ।